Liiska Shaqooyinka | Xalka OMG
Doorka wuxuu u baahan yahay shakhsi si uu u helo faham qoto dheer oo ku saabsan geeddi-socodka tafaariiqda ganacsiga iyo internetka, iyo sidoo kale horumarinta xirfadaha asaasiga ah ee la xiriira Adeegyada Xisaabinta iyo B2B Sales & Marketing. Hooska doorka ayaa hoos lagu faahfaahiyay.
Waajibaadka Muhiimka ah:
Horumarinta iyo cusbooneysiinta qalabka suuq-geynta
U diyaargarowga soo jeedinta iyo qalabka bandhigida ee loogu talagalay macaamiisha iman kara
Kaalmaynta qadarinta qoondaynta iyadoo lagu saleynayo shuruudaha macaamilka
Bixinta taageerada farsamo ee macaamiisha badanaa inta badan iyada oo loo marayo internetka, telefoonka iyo guriga dhexdiisa.
Xirfadaha Muhiimka ah iyo Shuruudaha:
Ardayga hadda ku sii jiraya shahaadada Bachelor's Degree / Diblooma ee Daraasaadka Ganacsiga / Maamulka / Suuqgeynta ayaa la door bidi lahaa
Heer sare oo ah faahfaahin buuxda oo sax ah marka dib loo eego ama abuuro qalab
Xiiso xiiso leh oo ka jirta warshadaha dadka da'da ah
Aqoonta leh barnaamijka xafiisyada (Word, Powerpoint, Excel) iyo awood u leh inay bartaan nidaam cusub si dhakhso ah.
Ciyaaryahan koox ah oo leh habdhaqan wanaagsan iyo shaqo-yaqaannimo; naftaada oo dhiirrigelin leh, yaa shaqeyn kara si madaxbanaan haddii loo baahdo
Fadlan codso jagadan adoo gudbinaya qoraalkaaga CV pieter@omgrp.net
Hirgelinta Beesha / Tababaraha Farsamada
Takhasuslaha Hirgelinta iyo Tababarka wuxuu mas'uul ka noqon doonaa bixinta tababaro wax ku ool ah iyo adeegyada taageerada fulinta shaqaalaha labadaba iyo kuwa ka hawlgala dibadda. Intaa waxaa dheer, Takhasusaha Hirgelinta iyo Tabobarka wuxuu ka caawin doonaa sameynta, iyo dukumentiyada, qalabka tababarka alaabta.
Isaga / iyadu waxay ka shaqeyneysaa sidii loo wadi lahaa heer sare oo ah jaangooyo / tababar macmiil. Waajibaadka sidoo kale waxaa ka mid ah aqoonsiga hagaajinta haboon si loo fududeeyo qanacsanaanta macaamilka.
Hawlaha macalinka ku meel gaadhka ah ayaa hogaaminaya fasalo
Samee fasalada webinar
Kudarinta tababarka la xidhiidha tababarka beesha (shadows, audits, iwm)
Keeni taageerada taageerada ah ee isdaba joogga ah (sida loo baahdo)
Ka caawi maamulka maareynta jadwalka tababarka
Kaalmaynta abuurista dukumiintiyo la xiriira tababarka
Sii jawaab celin si kor loogu qaado bixinta tababarka
Ku adkee shuruudaha isticmaalka farsamada gudaha
Aqoonsadaan oo ka caawiyaan sameynta habab lagu hagaajinayo bixinta tababarka
Aqoonso, fursado loogu talogalay tababbarada cusub ee tababarka.
Hubi oo la soco qanacsanaanta macaamiisha
Naftaada u tababaran macaamiisha iyo shaqaalaha gudaha.
Aqoonsiga dhibaatada iyo hirgalinta xalinta lamaanaha / heerka macaamiisha
Inay bilaabaan oo ay maamulaan isgaarsiinta joogtada ah ee xubnaha kooxda heerarka oo dhan
Ka caawinta dejinta, fahamka, iyo bixinta rajooyinka macaamiisha.
Soo sheeg oo la soco ku qanacsanaanta macaamilka iyo samee ficilada habboon ee lagu hagaajinayo qanacsanaanta qanacsanaanta macaamiisha
Shahaadada Bachelor-ka oo leh Khibrad u dhiganta ayaa loo baahan yahay. Tababbarka daryeelka caafimaadka ayaa doorbiday.
Xirfadaha udub dhexaadka iyo tababarka Xirfadaha adeegga macaamiisha
Xirfadaha kombuyuutarka ee aadka u yaqaan, tusaale, Microsoft Office, maareynta email, iwm.
Shahaadooyinka la siiyay ee ku saabsan Cilaaqaadka Macaamilka / Qanacsanaanta, Dulmiga, Dib-u-hagaajinta Sii-wadida, Ficil qaadashada / Natiijooyinka, Xirfadaha Xirfadaha, iyo ka shaqeynta qayb ka mid ah kooxda.
Qofka musharraxiinta ah waa in uu lahaado farsamooyin farsamo iyo isdhexgalka dadka.
11308 Wadarta Views 18 Views Maanta